Nezvedu - FuJian WaJuFo Sports Technology Co., Ltd
FuJian WaJuFo Sports Technology Co., Ltd yakavambwa muna 2003 iri muFUZHOU FUJIAN CHINA.WaJuFo inyanzvi yekambani yeBoka inoita munhandare yemitambo kusimudzira zvinhu, kugadzira uye kushambadzira mumisika yemumba neyekunze.
Isu tinopa zvigadzirwa zvina zvakakura zviri huswa hwekugadzira, TPE Infilling Granule, XPE uye PET Shock Pad pamwe neEPDM Particle yeRunning Track.Kugadzirwa kwegore negore kwehuswa hwekugadzira inenge3 mamiriyoni square mita, yeTPE yekuzadza granule ndeye50 zviuru mts,for shock pad inenge5 mamiriyoni square mita.
Iyo WaJuFo ine mabhesi mana ekugadzira ari muFuJian Province uye isu takamisa "WaJuFo sports field materials research Center" neYunivhesiti yeMalaya, kutsvaga hunyanzvi mukuvandudza zvigadzirwa nekugadzira kuve nechokwadi chemhando.
WaJuFo mhando uye zvigadzirwa zvakakurumbira mumusika wekugova senge vatatu vepamusoro muChina, zvakatengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi matatu mumakore mashanu apfuura.Isu takatopa certification Labosport, SGS, ISO9001 uye ISD14001 pamwe neRoHs.
①Kuburitswa kwepagore kweartificial turf inosvika mamirioni matatu masikweya mita, iyo elastic cushion i5 miriyoni masikweya metres, iyo TPE yekuzadza zvimedu matani zviuru makumi mashanu, EPDM runway particles matani zviuru gumi, uye mvura yekugadzira ice imiriyoni imwe yematani.
② maseti mashanu emidziyo yewaya yakatwasuka, 3 seti dzewaya dzakakomberedzwa, 6 seti dzetufting michina yeartificial turf, 1 seti yemuchina wegumming;3 mitsara yekugadzira ye elastic cushioning layer;6 mitsara yekugadzira yeTPE yekuzadza zvimedu;4 EPDM runway particles Mitsetse yekugadzira;2 mitsetse yekugadzira yemvura yekugadzira ice, yakazara yemakumi maviri nemana ekugadzira michina;
Iyo kambani ikozvino ine mana akajairika mabhesi ekugadzira, ari muNanping Jian'ou, Fuzhou Minhou, Jiangsu Zhenjiang, Quanzhou Jinjiang;mafekitori maviri emubatanidzwa welawn ari muQingdao, Shandong neSanming, Fujian.Panguva imwecheteyo, kambani inokoshesa zvakanyanya kutsvagisa nekusimudzira chigadzirwa, kunyanya mukuvandudza nekuvandudza kwezvinhu zvitsva uye maitiro matsva.Yasvika pakubvumirana nemasangano epamusoro ekutsvagisa kumba nekune dzimwe nyika, Fuzhou University neYunivhesiti yeMalaya, kuti vauye pamwe chete "wajufo Sports Field Material Research Center" , Kuti ive nechokwadi chehutano uye hutano hwewajufo.
Kuzadza Granule Factory
Zvigadzirwa zvedu nemasevhisi
Iyo kambani inonyanya kuita mukugadzira turf yeartificial turf, yeartificial turf ine hushamwari elastic kuvhunduka-inobata cushion (yakajairika XPE uye yakakwidziridzwa PET muviri sirika zvinhu), TPE ine hushamwari kwezvakatipoteredza elastic kuzadza zvimedu, EPDM runway zvidimbu, liquid synthetic ice uye meltblown polypropylene.R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwezvinhu zvakafanana.
Ipa pre-kutengesa: chirongwa cheinjiniya (kudhirowa), kurudziro yechigadzirwa, kutengeswa: kugadzirwa kwechigadzirwa kusimo, uye mushure mekutengesa: chigadzirwa chemhando yevimbiso (chitupa), mhinduro yemubvunzo wekuvaka uye mamwe matatu matatu marudzi emasevhisi.
Kubva 2016, mapurojekiti anopfuura chiuru akapedzwa, achifukidza matunhu makumi matatu nerimwe nemakanzuru muChina (kunze kweTaiwan, Hong Kong, neMacau).Yagara iine mukurumbira wakanaka uye pesvedzero mubhesi revatengi.Ikozvino mhando yekambani yatove inozivikanwa muindasitiri yemitambo yepamba, uye kutengesa kwayo chigadzirwa uye chikamu chemusika zviri pakati pevatatu vepamusoro muindasitiri yepamba.
Yakazadzikiswa zviyero / zvinodiwa
2019 Kuvakwa kwePeople's Stadium muPingtan, Fujian 50 Density XPE Shock Absorbing Cushion & Four Leaf Star FIFA Particles FIFA QUALITY
2018 Tianjin Dagang Sports Center Project 30 density XPE cushion & inopisa vhiri zvidimbu GB 36246-2018-- "Synthetic material surface sports ground yezvikoro zvepuraimari nesekondari"